उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको नागरिकताको उमेर १७ बर्ष मात्र ! गम्भिर कानूनी प्रश्न ? - info4nepal
काठमाडौ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको उमेर १७ बर्ष भएको खुल्न आएको छ । उनको नागरिकता सार्वजनिक भएसँगै नागरिकतामा उमेर १७ बर्ष उल्लेख गरेको भेटिएको हो । भगतपुर सप्तरी जन्मिएका भनिएका यादव स्थायी बासस्थान सुनसरी भएकाले उनले सुनसरीबाट नागरिकता लिएका छन् ।
नागरिकतामा उमेरको ठाँउमा साल, महिना, गते नभएर १७ बर्ष मात्र लेखिएको छ । यसले उनको उमेर अब पनि १७ बर्ष मात्र हो की कहिलेसम्म १७ बर्ष भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । पत्रकार रामकुमार एलनले उक्त नागरिकताको फोटोलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै लेखेका छन् । उपेन्द्र यादव भन्दा पनि दीनानाथ लम्साल नामधारी सरकारी जागिरे बाहुन चिन्न मन छ ।
बधाइ छ, म भन्दा १८ वर्ष कान्छो जो कानूनले बालिक भन्छ उनैलाई तराईका जनताले पाएका छन् । देशको उपप्रधानमन्त्रीपनि बने । अब देश युवाले हाँक्ने हो जादवजी । उनले ब्याङ्ग्यात्मक शब्द प्रयोग गरेका छन् । उपेन्द्र यादबको नागरिकतामा प्रकाशकीय अधिकृत दीनानाथ लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् । बारम्बार सांसद र मन्त्री बनिसकेका यादवको नै नागरिकता यस्तो हुनु रहस्यमय छ । यसले के अर्थ दिन्छ ? छुट्याउने जिम्मा पाठककै ।
जनवाेलीबाट जस्ताकाे त्यस्तै साभार गरिएकाे हाे ।
काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारिका लागि रोजाईको देश बनेको अरवियन मुलुक कुवेतमा पत्याउनै नसक्ने घटना भएका छन् । त्यहाँ धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । सन् २०१७ मा कुवेतमा रोजगारी गर्न आएका ३१ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ज्यान गुमाउनेमा १५ पुरुष र १६ महिला छन् । दूतावासका प्रथम सचिव भोगेन्द्र लिङ्देनका अनुसार हृदयघात, मस्तिष्कघात लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणबाट उनीहरुले ज्यान गुमाएका हुन् । घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने १४ र कम्पनीमा काम गर्ने १७ जनाले ज्यान गुमाएको लिङ्देनले जानकारी दिनुभयो । सन् २०१६ मा २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
कर बढाउने, उच्च सुविधा भाेगी स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथी यसरी खन्निए प्रधानमन्त्री अाेली !
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र जनप्रतिनिधिले उपभोग गरेका सुविधाका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सिंहदरबारमा अन्तक्र्रिया गर्दै उहाँले सो विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो ।
“कतिपय ठाउँमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले महङ्गा गाडी किनेको, कतिपय वडा अध्यक्षले डोजर किनेर सडक निर्माणमा ठेक्का आफैँ लिएका गुनासा आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरु जनप्रतिनिधि हो, त्यसकारण जनताले नरुचाउने काम नगर्नुहोस्, जनताले जे रुचाउँछन् त्यस काममा केन्द्रित हुनुहोस् ।” प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय सुविधा कानूनले दिएको भनेर त्यसैअनुसार उपभोग नगर्न आग्रह गर्दै राजनीतिमा त्याग पनि महत्वपूर्ण भएको स्मरण गराउनुभयो ।
“त्यस्ता सुविधालाई अत्यावश्यकबाहेक अहिले त्याग गरेर जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो,“ देश निर्माणको ठूलो जिम्मेवारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको काँधमा आइपुगेको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले दुर्गम ठाउँमा साधन स्रोतको कमी हुने भएकाले त्यहाँका जनप्रतिनिधिले धेरै चुनौतीमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुगम ठाउँ नगरपालिका र महानगरपालिका हुने भएकाले त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई केही सहज हुुने तर दुर्गमका गाउँपालिकामा यस्तो स्थिति नहुने बताउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका कामबाट जनताले प्रदेश र सङ्घीय सरकारप्रतिको पनि धारणा बनाउने भएकाले आफ्नो आचरणमा विशेष ख्याल गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । भेटमा महासङ्घका प्रतिनिधिले स्थानीय तहले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
हे भगवान नेपालमा यो कम्युनिस्ट हरुको बुद्धि कहिले आउने होला ?? यिनिहरुलाइ बुद्धि देउ भगवान